Ca (OH)2 + Na2CO3 → Tuug3 + 2NaOH
kaalshiyamka hydroxide kaarboon Sodium kaarboon kaarboon-macdanta sodium hydroxide
(digo yara) (dd) (rnn) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ca(OH)2 + Na2CO3 CO CaCO3 + 2NaOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Ca (OH) 2 (calcium hydroxide) oo la falgala Na2CO3
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CaCO3 (calcium carbonate) iyo NaOH (sodium hydroxide)?
Xalka salka u ah Ca (OH) 2 wuxuu ku falceliyaa cusbo Na2CO3
Dhacdada ka dib Ca (OH) 2 (calcium hydroxide) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ca(OH)2 + Na2CO3 CO CaCO3 + 2NaOH
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CaCO3 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaCO3 (calcium carbonate) alaab ahaan?
biyaha sodium xabagta sodium hydroxide
(lng) (rnn) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + Na2O → 2NaOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2O (sodium oxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2O (sodium oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + Na2O → 2NaOH
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (sodium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
2H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O2
biyaha sodium peroxide sodium hydroxide Oxygen
(lng) (rnn) (digo yara) (kh)
2 2 4 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O2
H2O wuxuu la fal galayaa Na2O2
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O2
CH3COOH + C2H5ONA → NaOH + CH3COOC2H5
etanoic acid sodium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3COOH (ethanoic acid) uga falcelisa C2H5ONa ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo CH3COOC2H5 ()?
C2H5ONa waxay la falgashaa CH3COOH
Dhacdada ka dib CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa C2H5ONa ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOC2H5 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOC2H5 () badeecad ahaan?